15th February 2020 by Barre Leave a Comment
Sanduuqa dhaqaalaha Adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo IMF iyo bangiga Adduunka ayaa aqbalay in Soomaaliya ay gaartay heer ay u qalanto in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay.
Kaddib markii uu soo idlaaday shirkii 12-ka bisha, Kristalina Georgieva, agaasimaha guud ee IMF ahana ku simaha guddoomiyaha ayaa tiri: “Go’aanka uu maanta golaha fulinta ee IMF ku gaaray in Soomaaliya ay u qalanto ka cafinta deymaha waa arrin taariikhi ah. Waxay caddeyneysaa sida loo aqoonsaday in Soomaaliya dadaal dhab ah u sameysay isbaddalada dhinaca dhaqaalaha iyo shuruudihii looga baahnaa ee ay kormeerka ku heysay IMF”.
“In Soomaaliya laga caawiyo inay gaarto guul deymaha looga cafiyo si markaas ay fursado kale ugu hesho dhaqaalaha ka taageeri kara yareynta faqriga waa howl mudnaan gaar ah u leh IMF”, ayey tiri.
“Maanta waxay Soomaaliya qaadday tallaabo muhiim ah oo u sahleysa inay dib u billowdo dhaqaalihii ay ka heli jirtay hay’adaha caalamiga ah ee deymaha bixiya, oo ay ku jirto IDA, kaasoo ah sanduuq aan ugu talagalnay dalalka saboolka ah. Waxaan Soomaaliya ugu hambalyeynayaa inay isbadallo dhinaca horumarka ah sameysay, taasoo wax badan ka qaban karta hoos u dhigista faqriga”, ayuu yiri Mr Malpass
Goormaa la filayaa in go’aanka kama dambeysta ah lasoo saaro?
Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go’aanka kasoo baxay hay’adahan caalamiga ah.
“Sadax Sano ee la soo dhaafay ayuu socday wadahadalka deynta cafinta Soomalaiya oo soo maray Afar Weji, mid walbana ay ku xirnaayeen shuruudo muhiimaddoodu ahayd dib u habeynta hay’adaha dhaqaalaha Dalka” ayuu yiri Beyle.
Wasiirka ayaa dhinaca kale faahfaahiyay goorta la filayo in lagu dhawaaqo go’aanka kama dambeysta ah ee deymaha looga cafinayo Soomaaliya.
“Saddex qeybood ayaa lacago nagu leh, Waxaa hormuud u ah IMF, Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa horumarinta Afrika, iyaga ayaana dariiqa deyn cafiska sameeyay. Markii saddexdooda la isku wada qabto waa hal qeyb, labada dhinac ee kale ee deymaha ku leh Soomaaliya waa qolada la yiraahdo Paris Clup iyo kuwa saddexaad oo loo yaqaanno non Paris Club. Ilaa bisha March ayaa la filayaa in lasoo saaro go’aanka kama dambeysta ah ee deynta looga cafinayo Soomaaliya”, ayuu yiri asiirka.
Mas’uuliyiinta Dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ah u xusul duubayay inay u hoggaansamaan shuruudaha lagu xiray, si ay ugu qalmaan in deymaha laga dul qaado.
Bishii April ee sanadkii lasoo dhaafay ayuu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Magaalada Washington kulamo kula yeeshay saraakiil ka socotay Bangiga Adduunka iyo Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF.